FAHASALAMANA :: Distrika dimy no efa tsy ahitana ny tazomoka intsony • AoRaha
FAHASALAMANA Distrika dimy no efa tsy ahitana ny tazomoka intsony
Miroso tsikelikely amin’ny fanafoanana tanteraka ny tazomoka i Madagasikara. Distrika dimy, ankehitriny no nahavita nandresy io aretina io, dia Antananarivo renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano sy Antsiranana I ary Antsirabe I.
“Tamin’ity taona 2018 ity ny minisiteran’ny Fahasalamam- bahoaka, dia nanao ny paikady nasionaly ho an’ny ady amin’ny tazomoka. Ny tanjona ao anatin’ny dimy taona ho avy ny hanafoana tsikelikely ny tazomoka eto Madagasikara. Anisan’ny ady lehibe izany satria mbola misimisy ihany ny faritra mihoatra ny 50% ny olona voan’ny tazomoka. Betsaka ny zavatra sy ny fanavaozana entina hanatsarana hiadiana amin’io aretina io. Misy dimy ny distrika manana ny tahan’ny tazomoka latsaky ny 1%”, raha ny voalazan’Andriamananjara Mauricette, talen’ ny foiben’ny ady atao amin’ny tazomoka.
Mitohy hatrany ny ady any amin’ireo faritra tena mbola misy ny otrik’aretina sy amin’izao vanim-potoanan’ny aretina izao, ny volana desambra hatramin’ ny volana mey. Ny famedrahana fanafody sy ny fampiasana lay misy odimoka dia anisan’ny paik’ady hohamafisina ao anatin’ny fandaharanasa amin’ny fanafoanana ny tazomoka manomboka ny taona 2019 hatramin’ny 2022.
Ny fanatonana toeram-pitsaboana no ahafahana mamantatra ny aretina fa tsy ny fanaovana dokotera tena. “Maro ny aretina miteraka hafanana eo amin’ny olona izay heverina fa tazo. Izay no hanafarana antsika fa rehefa mafanafana hoditra dia aza manao dokotera tena. Tsy voatery ho tazomoka no mahazo fa mety ho aretina hafa ka ilaina ny fahafantarana azy sy ny mitsabo azy mba tsy hiparitahany. Tsy maintsy fitiliana no atao amin’ny aretina tazomoka ka mila manatona toeram-pitsaboana hatrany”, hoy Rakotoarivony Manitra, talen’ny fampiroboroboana ara-pahasalamana eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam- bahoaka. Distrika miisa sivy amby telopolo, izany hoe 21,6%-n’ny mponina no mbola miaina ao anatin’ny faritra be ny otrik’aretina tazomoka. Anisan’izany ny any Toliara II, Sakaraha, Ampanihy, Betioky, Ihosy.
Sosialy • Tapatapany
Toetr’andro Ho maina ny andro hatramin’ny alatsinainy
Olan’ny hopitalim-panjakana Tsy maharaka ny filàna amin’ny fandidiana
Taratasin’ny mpamily sy ny fiara Vonona sady hamoraina ny famoahana ireo karatra biometrika vaovao
FITATERAM-BAHOAKA :: Mitohy ny fampiakarana ny saran-dalana
VALAN’ARETINA :: Manodidina ny valo arivo ireo olona voan’ny kitrotro
Fahatrarana zava-mahadomelina Nivadika vovo-javatra hafa indray ireo nolazaina ho rongony mahery vaika
Fanadiovana mahery vaika Ho avy ny fepetra goavana ho an’ireo polisy marobe
Tsindron’antsy an-dalambe Tovolahy namoy ny ainy teny am-piarahana tamin’ny olon-tiany
Fanolanana, fitifirana ankizy, vono… Miaramila fito mampijaly vahoaka
Fahasembanana tampoka Lehilahy jamba nanao izay fomba rehetra hiverenan’ny fahitany